ပထမဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ single သီချင်းကို ပရိသတ်တွေကိုနားထောင်စေချင်တဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း - Cele Gabar
ပထမဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ single သီချင်းကို ပရိသတ်တွေကိုနားထောင်စေချင်တဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း
မြန်မာပရိသတ်တွေအဝင်းလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Ready Player One ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာလည်း ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။ သူကတော့ PrizmaX ဆိုတဲ့ဂျပန်အမျိုးသားအဆိုတော်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။
ဒီအဖွဲ့ကတော့ပျက်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်း အဝင်းကတော့ တစ်ကိုယ်တော်အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အခုဆိုရင်လည်း ပထမဆုံးအနေနဲ့ single သီချင်းထွက်လာတဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာတာပါ။ ဒီသီချင်းကတော့ ဂျပန်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပေမဲ့ “ဒီနေ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမ Single ထွက်ပါပြီခင်ဗျာ။ ‌နားထောင်ပြီးပြီလား ခင်ဗျာ?? အများကြီးနားတောင်ပေးပါနော်” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားကာမျှဝေခဲ့တာပါ။
အဝင်းကတော့ ဂျပန်ပရိသတ်တွေလည်းရှိသလိုမြန်မာပရိသတ်တွေကိုလည်း မေ့မထားတာကြောင့် သီချင်းလေးကို အားပေးဖို့ပြောထားပါတယ်။ အဝင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရှိရင်နားထောင်လို့ရအောင်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်….
Source : Win_morisaki_official
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Celebrities, Celebrity Myanmar, Morisaki Win, Myanmar Cele, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, မိုရီဆာကီဝင်း
Previous post သားဂန်းရဲ့ ပုံလေးကို နောက်ခံထားပြီး ချစ်စရာကောင်းအောင် Tik Tok ဆော့ကစားလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်
Next post မောင်ချောလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး